Ogaden News Agency (ONA) – Dad Loo Qabqabtay Qaraxyadii Belgiumka Ka Dhacay Talaadadii.
Dad Loo Qabqabtay Qaraxyadii Belgiumka Ka Dhacay Talaadadii.
Posted by ONA Admin	/ March 26, 2016
Ciidamada Booliska ee dalka Belguim ayaa hawlgalo ay sameeyeen khamiistii kusoo qabqabtay lix qof oo lagu tuhusanyahay inay xidhiidh la leeyihiin kooxda Daacish ee sheegatay inay ka dambeysay weerarkii Talaadadii ka dhacay caasimada Brussels.
Booliiska ayaan weli shaacin magacyada dadka laqabtay balse xaqiijiyay in dadkan la horgeyn doono maxkamada si loo eego in dambiyo lagu soo rogayo ama in aan weli lagu heyn cadeynmo dhameystiran iyo inkale.
Ciidamada Amaanka ee dalka Belguim iyo sirdoonka ayaa wada hawlgalo balaadhan ooy uga hortagayaan in weeraro kaloo argagaxiso ah ay ka dhacaan dalkaasi. Weerarkii Talaadadii ka dhacay Airporka Brussels iyo xarun Tareenada laga raaco ayey ku dhinteen dad gaaraya 31 qof, waxaana ku dhaawacmay 270 qof oo kale.
Kadib weerarkii Brussels waxaa heegan lageliyey hay’adaha amaanka ee dalkaasi iyo waliba wadamada kalee Midowga Yurub ee jaarka la ah, iyadoo laga cabsi qabo in kooxo dib uga soo noqday wadanka Suuriya ay weeraro ka gaystaan gudaha Midowga Yurub.
Dagaalyahano gaaraya 500 oo heysta dhalashada dalka Belguim ayaa u dagaal tagay wadanka Suuriya, kuwaasi oo la sheegay in 200 oo kamid ah ay dib ugu soo noqdeen dalkaasi.